ဆရာငွိမျး၏ 8.July.2021 မှ 14.July.2021 ထိ တဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီးဟောစာတမျး
HomeKnowledgeဆရာငွိမျး၏ 8.July.2021 မှ 14.July.2021 ထိ တဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီးဟောစာတမျး
8. July. 2021 မှ 14. July. 2021 အထိ တဈပတျစာ ၇ ရကျသားသမီး ဟောစာတမျး
ဒီကာလအတှငျး အပွိုငျအဆိုငျ အတိုကျအခိုကျတှေ မြားနတေတျပါတယျ။ အဝေးက ဆှမြေိုးတှကွေောငျ့လဲ စိတျ ညဈစရာ တှကွေုံရတတျပါတယျ။ အိုးသဈအိမျသဈဝယျယူခွငျးတှေ၊ လုပျငနျးသဈစတငျခွငျးတှေ၊ နရောသဈမှာစတငျ နထေိုငျ ခွငျးတှေ အထူး ကောငျးပါတယျ။ မင်ျဂလာပှဲမြားလဲ ခမျးနားစှာစီရငျကငျြးပခှငျ့တှရေလာတတျပါတယျ။
ဒီကာလ အတှငျး အိမျနီးခငျြးကွောငျ့၊ ပတျဝနျကငျြကွောငျ့ အနီအနားက လုပျငနျးပွိုငျတှကွေောငျ့ စိတျညဈစိတျ ရှုပျရတတျပါ တယျ။ အိမျထောငျစုအတှငျး၊မိသားစုအတှငျး မပွလေညျစရာမြားကိုကွားဝငျဖွရှေငျးပေးခွငျးတှအေ ထူးဆောငျရှကျနိုငျ ပါတယျ။ ဒီကာလဟာ ကိုယျ့မကျြစိရှမှေ့ာ အခကျအခဲ ရှိနသေူမြားကို တတျနိုငျတဲ့ဘကျက ကူညီဖွရှေငျးပေးလို့အလှနျ ကောငျးပါတယျ။
မတငျမကဖြွဈစရာမြား၊ တှဝေဒှေိဟဖွဈစရာမြား ကွုံရတတျပါတယျ။ မိမိအနနေဲ့ ခေါငျးအေးအေးထားပွီးတော့လဲ ဆုံးဖွတျစခေငျြပါတယျ။ အရေးကွီးတဲ့ကိစ်စတှကေိုလဲ အလငျြစလိုမဆုံးဖွတျစခေငျြပါဘူး။ တရားတဘောငျ ရငျဆိုငျနရေသူမြား၊အမှနေဲ့ပတျသကျပွီးတော့လဲ အမှုရငျဆိုငျနရေသူမြား အခွအေနကေောငျး တှကွေုံရတတျပါ တယျ။ online ကနေ ခဈြသူသဈရတာမြိုးတှေ ကွုံနရေတတျပါတယျ။ အိမျထောငျရေး သာယာပါလိမျ့မယျ။ ပညာရေးနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့လဲ စိတျကူးသဈတှေ ရလာတတျပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး…. ၁/ ၃/ ၆
အထူးဟော.. အမြားကို နိုငျသလောကျ ကူညီပေးခှငျ့ရမယျ
ယတွာ… ပြားရညျ ဟငျးစားဇှနျး ၂ ဇှနျးခနျ့ ပနျးကနျတဈခပျြထဲ ထညျ့ပွီး ဘုရားလှူပါ
မိမိနဲ့ အံ့ဝငျခှငျကမြဖွဈတာတှကေို ထားခဲ့သငျ့တဲ့ကာလပါပဲ။ အလုပျထှကျခွငျး၊ အလုပျပွောငျးခွငျး၊ မိမိနဲ့အဆငျမပွတေဲ့ လကျတှဲဖျောတှကေို လမျးခှဲခွငျးမြားကို ဦးစားပေးဆောငျရှကျလိုကျ စခေငျြပါတယျ။ မိသားစုထဲမှာ ပွဿနာ ပျေါ တတျ ပါတယျ။ နိုငျငံခွားသှားဖို့ စီစဉျထားသူမြား သတငျးကောငျးကွားရတတျပါတယျ။ လူမြိုးခွား တစိမျးတရံတှဆေီက နအေကူအညီကောငျးတှေ ရလာမဲ့ ကာလပါပဲ။
ဘာဖွဈဖွဈ အခြိနျဆှဲလုပျသငျ့တဲ့ ကာလပါ။ အရေးကွီးတဲ့အလုပျတှေ လုပျရာမှာလဲ အခြိနျယူစဉျးစား ပွီးမှပဲ လုပျကိုငျစခေငျြပါတယျ။ အလောတကွီးလုပျလေ အမှားမြားလဖွေဈရ တတျပါ တယျ။ ခေါငျးအေးအေးထား ပွီးလုပျမှပဲ အဆငျပွပေါလိမျ့မယျ။ ပရဟိတအလုပျမြား၊ လူမှုကယျဆယျရေး အလုပျမြားလဲ ပါဝငျကူညီ ပေးရတတျပါတယျ။ တရားဘာဝနာပှားမြားခွငျး၊ ဝိပဿနာရှုပှားခွငျးတှလေုပျဆောငျခွငျးဖွငျ့ တဆငျ့ထကျတဆငျ့ အသိထူး အမွငျထူးတှရေရှိအောငျ လုပျဆောငျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဘာသာရေးကို အားထညျ့လုပျဆောငျသငျ့တဲ့ ကာလ ပါပဲ။
ကနျြးမာရေးနှငျ့ပတျသကျပွီး အရပွေားနဲ့ပတျသကျသော ရောဂါတှကေို သတိထားလိုကျစခေငျြပါတယျ။ အပူနာမြား ဝကျခွံမြား၊ အနာစိမျးမြားပေါကျတတျပါတယျ။ အခဈြရေးကိစ်စတှမှောတော့ စနျးအားကောငျးနတေဲ့လပါပဲ။ တဈဦးထကျမကသော အခဈြရေးမြိုလဲ ကွုံနရေတတျပါတယျ။ မိမိကလဲ လကျရှိခဈြသူထကျ နောကျကပေါကျတဲ့ ရှကွောပငျကို အလေးပေးနမေိတတျပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး ၂/ ၈/ ၉
အထူးဟော… အားနာစိတျမမှေးပါနဲ့။ လုပျသငျ့တာကို လုပျလိုကျပါ။
ယတွာ… သစ်စာပနျး (၆) ညှနျ့ ဘုရားပနျးအိုးထိုးပါ
ဒီကာလအတှငျး ကံကွမ်မာက မထငျမှတျဘဲ အကောငျးဘကျကို ရောကျရှိပါလိမျ့မယျ။ မရညျရှယျဘဲ နာမညျဂုဏျသတငျး အထူးတိုးတတျခွငျးနှငျ့ အောငျမွငျခွငျးတှကေိုလဲကွုံရတတျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ပဲဒီကာလမှာ စိတျကောငျးမှေး ပါ။ စတေနာကောငျးထားပါ။ သခြောပေါကျတိုးတတျပါလိမျ့မယျ။ စိတျကူးပုံဖျောထားတဲ့ကိစ်စတှကေို လကျတှအေကောငျ အထညျ ဖျောဆောငျရှကျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ သူမြားတှရေဲ့အပွောတှမှော နားမယောငျမိဖို့ အထူးလိုအပျပါတယျ။ ဒီကာလမှာ မိမိဆုံး ဖွတျခကျြကသာ အမှနျဆုံးဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
ဝနျထမျးမြား မိမိရရှိထားတဲ့ အလုပျရာထူးနှငျ့ လုပျပိုငျခှငျ့အပျေါမှာ မနာလိုအပုပျခသြူတှလေဲရှိနတေတျပါတယျ။ ကိုယျပိုငျလုပျငနျးတှမှောလဲ မိမိတို့ရဲ့လုပျငနျးပွိုငျတှေ၊ မိမိတို့အနီးအနား မှာဖှငျ့ထားတဲ့ လုပျငနျးတူတှရေဲ့ မနာလို တိုကျခိုကျတာကိုခံရတတျပါတယျ။ မိသားစုအတှငျးမှာတော့ ညီအကိုမောငျနှမ အခငျြးခငျြး စိတျဝမျးကှဲစရာမြား အထူးကွုံနရေတတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ပနျးတိုငျသခြောတှမွေ့ငျပွီး တော့ အကောငျးဆုံးလုပျဆောငျသှားနိုငျပါလိမျ့မယျ။
လူခဈြလူခငျ အလှနျပဲ မြားနတေတျပါတယျ။ ခဈြသူဆီက အကူအညီတှေ မြားစှာရတတျပါတယျ။ အိမျထောငျရေးမှာတော့ အိမျထောငျဘကျရဲ့ စိတျကူးအကွံအစညျတှေ မိမိအတှကျ အသုံးဝငျလာလိမျ့မယျ။ ပညာရေးကိစ်စတှအေပျေါ စိတျပါဝငျစားမှု အားနညျးနတေတျပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး…. ၆ /၇ /ဝ
အထူးဟော… ကံကောငျးမှုတှေ ကွုံနရေမယျ။
ယတွာ… ကနျြးမာရေး အားနညျးနသေူတဈဦးဦးကို အဆငျပွရော ဆေးဝါးဓာတျစာလှူပါ
အကောငျးဆုံးတှနှေငျ့ အဆိုးဆုံးတှကွေားထဲ ကားယားခှထိုငျ နမေိတတျတဲ့ ကာလပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ မိမိလမျးရှေးတာ မှနျဖို့ အထူးလိုအပျပါတယျ။ ကံကောငျးတာက မိမိဖွဈခငျြတာတှကေို ကူညီမဲ့သူတှနေဲ့ ကွုံနရေ တတျပါတယျ။ အုပျထိနျး သူတှကေို မိမိလိုခငျြတာတှေ ပူဆာလို့အလှနျကောငျးတဲ့ ကာလပါပဲ။ ငှကွေေးနဲ့ပတျသကျပွီး တော့လဲ စု ဆောငျးလို့ အလှနျ ကောငျးတဲ့လပါပဲ။ ငှစေုစာအုပျလုပျပွီး စတငျစုဆောငျးတာပဲဖွဈဖွဈ ၊စုဘူးနဲ့ငှစေုတာ မြိုးပဲဖွဈဖွဈ ဆောငျရှကျ နိုငျပါတယျ။
စိတျနဲ့ပတျသကျတဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးမြား ဆောငျရှကျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ငှရှောပါ။ငှကွေေးနဲ့ပတျသကျ ပွီး တော့ လဲ ရပိုငျခှငျ့တှေ ရလာတတျပါတယျ။ ကွနျ့ကွာနတေဲ့ငှကွေေးတှေ၊ ခြေးထားတဲ့ငှကွေေးတှေ၊ လကျလှနျထားတဲ့ငှကွေေးတှေ လဲ ပွနျလညျတောငျးခံလို့ ရပါလိမျ့မယျ။ ပြျောစရာခရီးမြား၊ စိတျခမျြးသာစရာ ခရီး မြားလဲ သှားရတတျပါ တယျ။ သူငယျခငျြး တှနေဲ့ပဲဖွဈဖွဈ၊ မိသားစုနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ ပြျောပှဲစားထှကျရတာ၊ ဘုရားဖူးခရီးသှားရတာမြိုးတှေ ကွုံရ တတျ ပါတယျ။
ဒီကာလမှာလဲ အလုပျတှကေို ခဏမထေ့ားပွီး စိတျအပနျးဖွလေို့ အထူးကောငျးတဲ့ အခြိနျလဲဖွဈပါတယျ။ အခဈြရေးကိစ်စ တှမှောတော့ ခဈြသူတှေ စကားကတောကျကဆ မြားရတတျပါတယျ။ အိမျထောငျရေးအတှကျ စိတျပူဖို့ မလိုသေးတဲ့ ကာလပါပဲ။ ကနျြးမာရေးအတှကျ ခံစားနတေဲ့ ဝဒေနာတှေ ရှိရငျတောငျ စတငျသကျသာခှငျ့တှေ ရလာတတျပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး… ၄/ ၈ /၃
အထူးဟော… ကံမွငျ့မားစရာလေးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။
ယတွာ… ဓာတျဆားထုပျလေးမြား ခြှေးထှကျမြားသူကို လှူလိုကျပါ
နအေိမျကိစ်စ၊ အလုပျကိစ်စမြား ဆောငျရှကျအဆငျပွမေညျ။ အရပျဝေး၊ နိုငျငံရပျခွားနှငျ့ ပတျသကျသော ခရီးကိစ်စ မြား ဆောငျရှကျ အဆငျပွမေညျ။ နအေိမျနရော၊ အလုပျနရော တိုးခြဲ့ခွငျး၊ ပွုပွငျခွငျးမြား ရှိမညျ။ လုပျရိုးလုပျစဉျမှ ခှဲ ထှကျ၍လမျးသဈထှငျကာ ဆောငျရှကျခွငျးမှ အောငျမွငျမှုမြား ရရှိမညျ။ ဦးတညျခကျြ လမျးကွောငျးပွောငျး၍ ဘဝတကျလမျးမြား ရရှိမညျ။ ငှရေေး၊ ကွေးရေးကိစ်စမြား စကားပွောဆို အောငျမွငျမညျ။
မိတျကောငျး၊ ဆှကေောငျး အကူအညီ ရ မညျ။ရညျရှယျခကျြသဈမြား ခြဲ့ထှငျရမညျ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့လဲ အထူးကောငျးပါတယျ။ ဆေးဝါး ဓာတျစာတှေ စတငျစားသောကျ တာမြိုးတှလေဲ ပွုလုပျနိုငျမဲ့ကာလပဲ ဖွဈပါတယျ။ ရောဂါရှာဖှခွေငျးတှေ၊ medical checkup လုပျ ခွငျးမြိုးတှေ အထူးဆောငျရှကျလို့ကောငျးတဲ့လဖွဈပါတယျ။
အခဈြရေးနှငျ့ ပတျသကျပွီးတော့လဲ အမှတျရစရာ၊ ပြျောစရာ အကောငျးဆုံးကာလလဲ ဖွဈပါတယျ။ အိမျထောငျပွုဖို့ စီစဉျတာမြိုးတှေ၊ ဒီကာလမှာ ပွောဆိုဆောငျရှကျလို့အထူး ကောငျး ပါတယျ။ အိမျထောငျရေးကိစ်စတှမှောတော့ အဆငျပွတေိုးတတျမှုတှေ ရှိပါ လိမျ့ မယျ။ အဆငျ မပွတောတှကေို ညှိနှိုငျးလို့ အကောငျးဆုံးကာလပါပဲ။ ပညာရေးနဲ့ပတျသကျရငျတော့ အသကျမှေးမှုနဲ့ဆိုငျသော ပညာရပျ မြိုးတှကေို လလေ့ာ သငျယူသငျ့တဲ့ကာလပါပဲ။
အကြိုးပေးဂဏနျး.. ၅/ ၆/ ၈
အထူးဟော.. စကားအောငျမညျ။ ဩဇာညောငျးမယျ။
ယတွာ… ခြိုငျ့တှေ ၊ဗှကျထနတေဲ့လမျးတှကေို သဲခငျးပါ
အခကျအခဲမြားကို ကြျောလှားနိုငျမညျ။ ဘဝတတျလမျးမြား ပှငျ့မညျ။ အပွိုငျအဆိုငျနှငျ့ အတိုကျအခံမြားမညျ။ မနာလိုသူမြား ပျေါပေါကျ မညျ။ အခကျအခဲမြား မညျမြှရှိစေ အထူးအောငျမွငျမညျ။ ဘဝတိုးတတျမှုမြား ရှိမညျ။ ငှကွေေး ကံ၊ စီးပှားကံတတျလမျးပှငျ့သော အခြိနျကာလဖွဈသညျ။ မိမိအပျေါ ဒုက်ခပေးသောသူမြားရနျမှ ကငျးဝေးသှားမညျ။ အရာရာ စိတျခမျြးမွစေ့ရာမြား ကွုံမညျ။
မိမိလိုလားသညျမြားကို မဖွဈမနလေုပျကိုငျရနျ ကောငျးသညျ။ ရညျမှနျးခကျြသဈမြား၊ ရညျရှယျခကျြသဈမြား အောငျမွငျမညျ။ အရပျဝေးသို့ ရောကျရှိနတေဲ့ သူတှနေဲ့လညျး ပွနျလညျ ဆုံဆညျးရတတျပါတယျ။ တဈရပျတဈကြေးက ဆှမြေိုးရဲ့သတငျးကောငျးတှလေညျး ကွားရတတျပါတယျ။ အောကျလကျ ငယျသားတှေ ရပျဝေး ခရီးလညျးသှားရတတျပါတယျ။ ပညာရေးအစီအစဉျ၊ သငျတနျးအစီအစဉျတှလေညျး လကျလြှော့ရမတတျ ဖွဈသှားရတတျ ပါတယျ။ ဆရာသမား၊ကွီးကဲသူတို့ရဲ့ သောကရောကျဖှယျ သတငျးမြားလညျး ကွားသိရတတျပါ တယျ။
အလုပျ၊ရညျ ရှယျခကျြတှမှော မိနျးမတဈယောကျ ဝငျရှုတျလာလိမျ့မညျ။ ကနျြးမာရေးအတှကျ အနညျးငယျ စိတျပူနရေတတျပါတယျ။ ကူးစကျရောဂါတှဖွေဈလှယျ။ မိမိကိုယျတိုငျကလဲ ကိုယျခံအားနညျးနနေိုငျပါတယျ။ အခဈြရေးမှာတော့ ကွားလူအနှောကျ အယှကျတှကွေုံရတတျပါတယျ။ အိမျထောငျရေးအတှကျ စိတျပူစရာလေးတှေ အနညျးငယျ ရှိတတျပါတယျ။ အိမျထောငျဘကျရဲ့ ပွဿနာရှာမှုတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး… ၃ /၇ /၉
ယတွာ.. သတ်ထာဒဝေ မနုဿနံ ဂုဏျတျောကို ဒီတဈပါတျအတှငျး အဓိဌာနျဝငျပါ
အလှနျ ရနျအတိုကျအခံမြားနမေညျ။ အပွိုငျအဆိုငျ အလှနျမြားမညျ။ မနာလိုသောသူပေါမြားနမေညျ။ အေးအေး ခမျြးခမျြးနေ၍ မရနိုငျတော့ပါ။ မတျောတဆ ထိခိုကျမှု အန်တရာယျမြား အထူးဂရုစိုကျပါ။ အနကျရောငျ မဝတျသငျ့ပါ။ မိမိအနနေဲ့ အရာရာ လကျလှတျစပယျ မလုပျသငျ့တဲ့ ကာလပါပဲ။ကနျြးမာရေးအတှကျ စိတျပူစရာမရှိပမေဲ့ ရောဂါဟောငျး ဝဒေနာဟောငျးတှေ ပျေါနတေတျပါတယျ။ အငနျလြှော့စားပါ။ အပူအစပျနှငျ့ အရကျလြှော့သောကျပါ။
မထငျမှတျထားသော သဘာဝဘေး အန်တရာယျမြားနှငျ့ကွုံကာ ဆုံးရှုံးမှုမြား ရှိနမေညျ။ ပညာသငျတနျးနှငျ့ ပတျသကျသောကိစ်စမြား အဆငျပွေ အောငျမွငျမညျ။ အခကျအခဲမြား ဖွရှေငျးရနျ အခါကောငျးမြား ကရြောကျနပေါသညျ။ အလှူမင်ျဂလာ ကိစ်စမြား ပါဝငျပတျသကျနရေမညျ။ ကိုယျကမညျမြှ ဝီရိယစိုကျထုတျ၍ လုပျကိုငျဆောငျရှကျပါစေ၊ ပတျသကျဆကျနှယျသော လုပျငနျးဝနျးကငျြမှ လူမြားသညျ အလုပျကို စိတျမဝငျစားပဲ၊ ရသောခို အခြိနျဆှဲ၍ အပြျောအပါးဘကျသို့ စိတျသနျနရေ ခွငျးကို တှကွေုံ့နရေတတျပါသညျ။
အခဈြရေးမှာတော့ ခဈြသူခငျသူတှမြေားတာ စုတျအားကောငျးတာမြိုး ကွုံရတတျ ပါတယျ။ ကိုယျခဈြနသေူက ဖှငျ့ပွောလာတာမြိုး၊ ရလောမွောငျးပေးစရာပွောတာမြိုးတှေ ကွုံရလိမျ့မယျ။ အိမျထောငျရေး အိမျထောငျဘကျက အရာရာ ကူညီဖေးမတတျတာမြိုးတှေ ကွုံနရေတတျပါတယျ။
အကြိုးပေးဂဏနျး… ၁/ ၅ /၂
အထူးဟော… ရောဂါဟောငျး အမှုဟောငျးတှေ ပျေါလာတတျပါတယျ။
ယတွာ.. ငါးအရှငျဖွဈစေ၊ ဂဏနျးအရှငျဖွဈစေ ဝယျလှတျပါ
ဆရာငြိမ်း၏ 8.July.2021 မှ 14.July.2021 ထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း
8. July. 2021 မှ 14. July. 2021 အထိတစ်ပတ်စာ ၇ ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း
ဒီကာလအတွင်း အပြိုင်အဆိုင် အတိုက်အခိုက်တွေ များနေတတ်ပါတယ်။ အဝေးက ဆွေမျိုးတွေကြောင့်လဲ စိတ် ညစ်စရာ တွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ အိုးသစ်အိမ်သစ်ဝယ်ယူခြင်းတွေ၊ လုပ်ငန်းသစ်စတင်ခြင်းတွေ၊ နေရာသစ်မှာစတင် နေထိုင် ခြင်းတွေ အထူး ကောင်းပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲများလဲ ခမ်းနားစွာစီရင်ကျင်းပခွင့်တွေရလာတတ်ပါတယ်။
ဒီကာလ အတွင်း အိမ်နီးချင်းကြောင့်၊ ပတ်ဝန်ကျင်ကြောင့် အနီအနားက လုပ်ငန်းပြိုင်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်စိတ် ရှုပ်ရတတ်ပါ တယ်။ အိမ်ထောင်စုအတွင်း၊မိသားစုအတွင်း မပြေလည်စရာများကိုကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးခြင်းတွေအ ထူးဆောင်ရွက်နိုင် ပါတယ်။ ဒီကာလဟာ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့မှာ အခက်အခဲ ရှိနေသူများကို တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီဖြေရှင်းပေးလို့အလွန် ကောင်းပါတယ်။
မတင်မကျဖြစ်စရာများ၊ တွေဝေဒွိဟဖြစ်စရာများ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ ခေါင်းအေးအေးထားပြီးတော့လဲ ဆုံးဖြတ်စေချင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုလဲ အလျင်စလိုမဆုံးဖြတ်စေချင်ပါဘူး။ တရားတဘောင် ရင်ဆိုင်နေရသူများ၊အမွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ အမှုရင်ဆိုင်နေရသူများ အခြေအနေကောင်း တွေကြုံရတတ်ပါ တယ်။ online ကနေ ချစ်သူသစ်ရတာမျိုးတွေ ကြုံနေရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေး သာယာပါလိမ့်မယ်။ ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ စိတ်ကူးသစ်တွေ ရလာတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း…. ၁/ ၃/ ၆
အထူးဟော.. အများကို နိုင်သလောက် ကူညီပေးခွင့်ရမယ်
ယတြာ… ပျားရည် ဟင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်းခန့် ပန်းကန်တစ်ချပ်ထဲ ထည့်ပြီး ဘုရားလှူပါ
မိမိနဲ့ အံ့ဝင်ခွင်ကျမဖြစ်တာတွေကို ထားခဲ့သင့်တဲ့ကာလပါပဲ။ အလုပ်ထွက်ခြင်း၊ အလုပ်ပြောင်းခြင်း၊ မိမိနဲ့အဆင်မပြေတဲ့ လက်တွဲဖော်တွေကို လမ်းခွဲခြင်းများကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်လိုက် စေချင်ပါတယ်။ မိသားစုထဲမှာ ပြဿနာ ပေါ် တတ် ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသွားဖို့ စီစဉ်ထားသူများ သတင်းကောင်းကြားရတတ်ပါတယ်။ လူမျိုးခြား တစိမ်းတရံတွေဆီက နေအကူအညီကောင်းတွေ ရလာမဲ့ ကာလပါပဲ။
ဘာဖြစ်ဖြစ် အချိန်ဆွဲလုပ်သင့်တဲ့ ကာလပါ။ အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ရာမှာလဲ အချိန်ယူစဉ်းစား ပြီးမှပဲ လုပ်ကိုင်စေချင်ပါတယ်။ အလောတကြီးလုပ်လေ အမှားများလေဖြစ်ရ တတ်ပါ တယ်။ ခေါင်းအေးအေးထား ပြီးလုပ်မှပဲ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ပရဟိတအလုပ်များ၊ လူမှုကယ်ဆယ်ရေး အလုပ်များလဲ ပါဝင်ကူညီ ပေးရတတ်ပါတယ်။ တရားဘာဝနာပွားများခြင်း၊ ဝိပဿနာရှုပွားခြင်းတွေလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် တဆင့်ထက်တဆင့် အသိထူး အမြင်ထူးတွေရရှိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာသာရေးကို အားထည့်လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ ကာလ ပါပဲ။
ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး အရေပြားနဲ့ပတ်သက်သော ရောဂါတွေကို သတိထားလိုက်စေချင်ပါတယ်။ အပူနာများ ဝက်ခြံများ၊ အနာစိမ်းများပေါက်တတ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့ စန်းအားကောင်းနေတဲ့လပါပဲ။ တစ်ဦးထက်မကသော အချစ်ရေးမျိုလဲ ကြုံနေရတတ်ပါတယ်။ မိမိကလဲ လက်ရှိချစ်သူထက် နောက်ကပေါက်တဲ့ ရွှေကြာပင်ကို အလေးပေးနေမိတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း ၂/ ၈/ ၉
အထူးဟော… အားနာစိတ်မမွေးပါနဲ့။ လုပ်သင့်တာကို လုပ်လိုက်ပါ။
ယတြာ… သစ္စာပန်း (၆) ညွှန့် ဘုရားပန်းအိုးထိုးပါ
ဒီကာလအတွင်း ကံကြမ္မာက မထင်မှတ်ဘဲ အကောင်းဘက်ကို ရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ မရည်ရွယ်ဘဲ နာမည်ဂုဏ်သတင်း အထူးတိုးတတ်ခြင်းနှင့် အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုလဲကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲဒီကာလမှာ စိတ်ကောင်းမွေး ပါ။ စေတနာကောင်းထားပါ။ သေချာပေါက်တိုးတတ်ပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကို လက်တွေအကောင် အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သူများတွေရဲ့အပြောတွေမှာ နားမယောင်မိဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီကာလမှာ မိမိဆုံး ဖြတ်ချက်ကသာ အမှန်ဆုံးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဝန်ထမ်းများ မိမိရရှိထားတဲ့ အလုပ်ရာထူးနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပေါ်မှာ မနာလိုအပုပ်ချသူတွေလဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာလဲ မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းပြိုင်တွေ၊ မိမိတို့အနီးအနား မှာဖွင့်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းတူတွေရဲ့ မနာလို တိုက်ခိုက်တာကိုခံရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းမှာတော့ ညီအကိုမောင်နှမ အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲစရာများ အထူးကြုံနေရတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်သေချာတွေ့မြင်ပြီး တော့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လူချစ်လူခင် အလွန်ပဲ များနေတတ်ပါတယ်။ ချစ်သူဆီက အကူအညီတွေ များစွာရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ စိတ်ကူးအကြံအစည်တွေ မိမိအတွက် အသုံးဝင်လာလိမ့်မယ်။ ပညာရေးကိစ္စတွေအပေါ် စိတ်ပါဝင်စားမှု အားနည်းနေတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း…. ၆ /၇ /ဝ
အထူးဟော… ကံကောင်းမှုတွေ ကြုံနေရမယ်။
ယတြာ… ကျန်းမာရေး အားနည်းနေသူတစ်ဦးဦးကို အဆင်ပြေရာ ဆေးဝါးဓာတ်စာလှူပါ
အကောင်းဆုံးတွေနှင့် အဆိုးဆုံးတွေကြားထဲ ကားယားခွထိုင် နေမိတတ်တဲ့ ကာလပါပဲ။ ဒါကြောင့် မိမိလမ်းရွေးတာ မှန်ဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ကံကောင်းတာက မိမိဖြစ်ချင်တာတွေကို ကူညီမဲ့သူတွေနဲ့ ကြုံနေရ တတ်ပါတယ်။ အုပ်ထိန်း သူတွေကို မိမိလိုချင်တာတွေ ပူဆာလို့အလွန်ကောင်းတဲ့ ကာလပါပဲ။ ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော့လဲ စု ဆောင်းလို့ အလွန် ကောင်းတဲ့လပါပဲ။ ငွေစုစာအုပ်လုပ်ပြီး စတင်စုဆောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊စုဘူးနဲ့ငွေစုတာ မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဆောင်ရွက် နိုင်ပါတယ်။
စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ငွေရှာပါ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက် ပြီး တော့ လဲ ရပိုင်ခွင့်တွေ ရလာတတ်ပါတယ်။ ကြန့်ကြာနေတဲ့ငွေကြေးတွေ၊ ချေးထားတဲ့ငွေကြေးတွေ၊ လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေ လဲ ပြန်လည်တောင်းခံလို့ ရပါလိမ့်မယ်။ ပျော်စရာခရီးများ၊ စိတ်ချမ်းသာစရာ ခရီး များလဲ သွားရတတ်ပါ တယ်။ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိသားစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ပျော်ပွဲစားထွက်ရတာ၊ ဘုရားဖူးခရီးသွားရတာမျိုးတွေ ကြုံရ တတ် ပါတယ်။
ဒီကာလမှာလဲ အလုပ်တွေကို ခဏမေ့ထားပြီး စိတ်အပန်းဖြေလို့ အထူးကောင်းတဲ့ အချိန်လဲဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ရေးကိစ္စ တွေမှာတော့ ချစ်သူတွေ စကားကတောက်ကဆ များရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် စိတ်ပူဖို့ မလိုသေးတဲ့ ကာလပါပဲ။ ကျန်းမာရေးအတွက် ခံစားနေတဲ့ ဝေဒနာတွေ ရှိရင်တောင် စတင်သက်သာခွင့်တွေ ရလာတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း… ၄/ ၈ /၃
အထူးဟော… ကံမြင့်မားစရာလေးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
ယတြာ… ဓာတ်ဆားထုပ်လေးများ ချွေးထွက်များသူကို လှူလိုက်ပါ
နေအိမ်ကိစ္စ၊ အလုပ်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်အဆင်ပြေမည်။ အရပ်ဝေး၊ နိုင်ငံရပ်ခြားနှင့် ပတ်သက်သော ခရီးကိစ္စ များ ဆောင်ရွက် အဆင်ပြေမည်။ နေအိမ်နေရာ၊ အလုပ်နေရာ တိုးချဲ့ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းများ ရှိမည်။ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မှ ခွဲ ထွက်၍လမ်းသစ်ထွင်ကာ ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ အောင်မြင်မှုများ ရရှိမည်။ ဦးတည်ချက် လမ်းကြောင်းပြောင်း၍ ဘဝတက်လမ်းများ ရရှိမည်။ ငွေရေး၊ ကြေးရေးကိစ္စများ စကားပြောဆို အောင်မြင်မည်။
မိတ်ကောင်း၊ ဆွေကောင်း အကူအညီ ရ မည်။ရည်ရွယ်ချက်သစ်များ ချဲ့ထွင်ရမည်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ အထူးကောင်းပါတယ်။ ဆေးဝါး ဓာတ်စာတွေ စတင်စားသောက် တာမျိုးတွေလဲ ပြုလုပ်နိုင်မဲ့ကာလပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါရှာဖွေခြင်းတွေ၊ medical checkup လုပ် ခြင်းမျိုးတွေ အထူးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့လဖြစ်ပါတယ်။
အချစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ အမှတ်ရစရာ၊ ပျော်စရာ အကောင်းဆုံးကာလလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စီစဉ်တာမျိုးတွေ၊ ဒီကာလမှာ ပြောဆိုဆောင်ရွက်လို့အထူး ကောင်း ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စတွေမှာတော့ အဆင်ပြေတိုးတတ်မှုတွေ ရှိပါ လိမ့် မယ်။ အဆင် မပြေတာတွေကို ညှိနှိုင်းလို့ အကောင်းဆုံးကာလပါပဲ။ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ အသက်မွေးမှုနဲ့ဆိုင်သော ပညာရပ် မျိုးတွေကို လေ့လာ သင်ယူသင့်တဲ့ကာလပါပဲ။
အကျိုးပေးဂဏန်း.. ၅/ ၆/ ၈
အထူးဟော.. စကားအောင်မည်။ ဩဇာညောင်းမယ်။
ယတြာ… ချိုင့်တွေ ၊ဗွက်ထနေတဲ့လမ်းတွေကို သဲခင်းပါ
အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်မည်။ ဘဝတတ်လမ်းများ ပွင့်မည်။ အပြိုင်အဆိုင်နှင့် အတိုက်အခံများမည်။ မနာလိုသူများ ပေါ်ပေါက် မည်။ အခက်အခဲများ မည်မျှရှိစေ အထူးအောင်မြင်မည်။ ဘဝတိုးတတ်မှုများ ရှိမည်။ ငွေကြေး ကံ၊ စီးပွားကံတတ်လမ်းပွင့်သော အချိန်ကာလဖြစ်သည်။ မိမိအပေါ် ဒုက္ခပေးသောသူများရန်မှ ကင်းဝေးသွားမည်။ အရာရာ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများ ကြုံမည်။
မိမိလိုလားသည်များကို မဖြစ်မနေလုပ်ကိုင်ရန် ကောင်းသည်။ ရည်မှန်းချက်သစ်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်သစ်များ အောင်မြင်မည်။ အရပ်ဝေးသို့ ရောက်ရှိနေတဲ့ သူတွေနဲ့လည်း ပြန်လည် ဆုံဆည်းရတတ်ပါတယ်။ တစ်ရပ်တစ်ကျေးက ဆွေမျိုးရဲ့သတင်းကောင်းတွေလည်း ကြားရတတ်ပါတယ်။ အောက်လက် ငယ်သားတွေ ရပ်ဝေး ခရီးလည်းသွားရတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးအစီအစဉ်၊ သင်တန်းအစီအစဉ်တွေလည်း လက်လျှော့ရမတတ် ဖြစ်သွားရတတ် ပါတယ်။ ဆရာသမား၊ကြီးကဲသူတို့ရဲ့ သောကရောက်ဖွယ် သတင်းများလည်း ကြားသိရတတ်ပါ တယ်။
အလုပ်၊ရည် ရွယ်ချက်တွေမှာ မိန်းမတစ်ယောက် ဝင်ရှုတ်လာလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အနည်းငယ် စိတ်ပူနေရတတ်ပါတယ်။ ကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်လွယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်ကလဲ ကိုယ်ခံအားနည်းနေနိုင်ပါတယ်။ အချစ်ရေးမှာတော့ ကြားလူအနှောက် အယှက်တွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရေးအတွက် စိတ်ပူစရာလေးတွေ အနည်းငယ် ရှိတတ်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဘက်ရဲ့ ပြဿနာရှာမှုတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း… ၃ /၇ /၉
ယတြာ.. သတ္ထာဒေဝ မနုဿနံ ဂုဏ်တော်ကို ဒီတစ်ပါတ်အတွင်း အဓိဌာန်ဝင်ပါ
အလွန် ရန်အတိုက်အခံများနေမည်။ အပြိုင်အဆိုင် အလွန်များမည်။ မနာလိုသောသူပေါများနေမည်။ အေးအေး ချမ်းချမ်းနေ၍ မရနိုင်တော့ပါ။ မတော်တဆ ထိခိုက်မှု အန္တရာယ်များ အထူးဂရုစိုက်ပါ။ အနက်ရောင် မဝတ်သင့်ပါ။ မိမိအနေနဲ့ အရာရာ လက်လွတ်စပယ် မလုပ်သင့်တဲ့ ကာလပါပဲ။ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ပူစရာမရှိပေမဲ့ ရောဂါဟောင်း ဝေဒနာဟောင်းတွေ ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။ အငန်လျှော့စားပါ။ အပူအစပ်နှင့် အရက်လျှော့သောက်ပါ။
မထင်မှတ်ထားသော သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များနှင့်ကြုံကာ ဆုံးရှုံးမှုများ ရှိနေမည်။ ပညာသင်တန်းနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများ အဆင်ပြေ အောင်မြင်မည်။ အခက်အခဲများ ဖြေရှင်းရန် အခါကောင်းများ ကျရောက်နေပါသည်။ အလှူမင်္ဂလာ ကိစ္စများ ပါဝင်ပတ်သက်နေရမည်။ ကိုယ်ကမည်မျှ ဝီရိယစိုက်ထုတ်၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပါစေ၊ ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်းဝန်းကျင်မှ လူများသည် အလုပ်ကို စိတ်မဝင်စားပဲ၊ ရေသာခို အချိန်ဆွဲ၍ အပျော်အပါးဘက်သို့ စိတ်သန်နေရ ခြင်းကို တွေ့ကြုံနေရတတ်ပါသည်။
အချစ်ရေးမှာတော့ ချစ်သူခင်သူတွေများတာ စုတ်အားကောင်းတာမျိုး ကြုံရတတ် ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်နေသူက ဖွင့်ပြောလာတာမျိုး၊ ရေလာမြောင်းပေးစရာပြောတာမျိုးတွေ ကြုံရလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေး အိမ်ထောင်ဘက်က အရာရာ ကူညီဖေးမတတ်တာမျိုးတွေ ကြုံနေရတတ်ပါတယ်။
အကျိုးပေးဂဏန်း… ၁/ ၅ /၂
အထူးဟော… ရောဂါဟောင်း အမှုဟောင်းတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
ယတြာ.. ငါးအရှင်ဖြစ်စေ၊ ဂဏန်းအရှင်ဖြစ်စေ ဝယ်လွှတ်ပါ